कतै तपाईको २–३ मिनेटमैं त खस्दैन, थाहा पाउनुस् शीघ्र स्खलन रोक्ने उपाय - Everest Dainik - News from Nepal
म २७ वर्षीय अविवाहित युवक हुँ । मेरो समस्या fast fall हो, अर्थात् २–३ मिनेटपछि नै fall हुन्छ । त्यसकारण यो छोटो समय कसरी रोक्ने र कसरी समय लम्ब्याउने ? मेरो लिंग पनि रातो भएर दुख्छ । – पी.
याे पनि पढ्नुस सेक्स गर्दा छिट्टै खस्छ ? चिन्ता नगर्नुस्, यहाँ छ लामो पारी खेल्ने उपाय
याे पनि पढ्नुस कस्तो ओठ हुने महिला बढी कामुक हुन्छन्?
याे पनि पढ्नुस Secrets of Great Sex After 40
ट्याग्स: Sexual health, शीघ्र स्खलन, सेक्स